Waa maxay sababta ay tahay inaad samayso xisaab dukaamaysi - gali - saxiix - up shoppingectect24.com - SD24
Home > Waa maxay sababta ay tahay inaad sameyso xisaab dukaamaysi - isku qor - saxiix
Markaad leedahay xisaab oo aad gashid nidaamka, nidaamku wuxuu awoodi doonaa inuu xasuusto raadintaada iyo aragtidaada alaabta waxay ku siin kartaa natiijooyin fiican iyo dib u eegis sheyga oo gaar ah.
Nidaamka ayaa xusuusan doona kala doorashooyinka lacag bixinta, si aanad u galin macluumaadkaas waqti kasta amniga dheeriga ah.
Waxaan sidoo kale ku siin karnaa qaar ka mid ah qawaaniinta lacag-dhimista lagu iibiyo.
Uma adeegi doono macluumaadka ujeeddo kale.
Fadlan ka fiiri tixraaca sidoo kale bogga Qarsoodiga Qarsoodiga.